News - Farqiga u dhexeeya Halogen, Hid iyo Laydhka hore
Farqiga udhaxeeya Halogen, Hid iyo Laydhka hore
Waxaa jira saddex nooc oo waaweyn oo nal hore ah. Noocyada nalka hore ee baabuurta waa Halogen, Xenon & LED nalka hore ee korantada. Mid kastaa wuu u shaqeeyaa si ka duwan qaabka ay u soo saaraan iftiinka sidaas darteedna waxay ku soo saaraan nuucyo kala duwan wadada.
Nalalka Halogen ayaa runtii ah laydhadhka ugu badan ee baabuurta la isticmaalo. Hal abuurnimadoodu waxay soo bilaabatay 1960s taas oo xal u ahayd abuurista iftiin leh ilo kooban. Sida nalalka shidan, halogens-ka waxay isticmaalaan feyl diiran tungsten si ay u soo saaraan iftiin. Fiiladdu si kastaba ha noqotee waxay kuxirantahay xumbo gaaska halogen-ka ah oo aan ka duwaneyn dabka, iyada oo loo eegayo hagaajinta cimri-dhererka iyo waxqabadka. Nalalkaani way fududahay in la soo saaro taasoo ka dhigaysa habka wax soo saar jaban. Intaas waxaa sii dheer kharashyada beddelka ayaa sidoo kale aad u hooseeya. Nalalka Halogen waxay ku habboonaan karaan inta badan gawaarida moodooyinka kala duwan maadaama ay ku kala duwan yihiin cabirro iyo qaabab kala duwan. Nalalkaan si kastaba ha noqotee ma bixiyaan muuqaalka ugu fiican sida nalalka HID-da cad iyo LED-yada. Xaddi aad u badan oo kuleyl ah ayaa lumay intaad isticmaaleysid laydhadhkan waaweyn oo markaa tamar lumiya. Intaa waxaa sii dheer, iyagu aad bay u jilicsan yihiin oo u baahan daryeel dheeri ah oo ka duwan kuwa loo yaqaan 'LEDs' iyo 'HID'
QARISKA (Dheecaanka Cufka Sare)
Iyagu waxay caan ku yihiin soo bixitaankooda iftiinka dhalaalaya ee fog. Tungsten-kooda waxay kuxiran yihiin tuubo quartz ka buuxo gaaska xenon. Waxay u baahan karaan awood dheeri ah markay daaran yihiin laakiin waxay u isticmaalaan wax aad uga yar si ay u ilaaliyaan dhalaalka. Intaa waxaa sii dheer, waxay leeyihiin cimri dheer marka loo eego halogens-ka. Waxay u muuqan karaan kuwo kafiican laakiin waxay sidoo kale soo bandhigayaan xadidaadyo sida inay qaali yihiin ilaa wax soosaarka iyo badalkeedaba laga hadlayo Ma fududa in wax soo saar laga sameeyo qaab dhismeedkooda isku dhafan. Iftiinkooda dhalaalayaa wuxuu saameyn indho la’aan ah ku keenayaa taraafikada soo socota oo ah wax aan loo baahnayn oo khatar ku keeni kara waddooyinka.
Laydhka (Daadinta Iftiinka Iftiinka)
Kuwani hadda waa hal-abuurnimada hadda iyo tan ugu dambaysa ee kala wareegeysa HID iyo Halogens. Laydhka wuxuu shaqaaleeyaa tiknoolajiyada diodiyaha halkaasoo ay ka soo saaraan iftiin marka korantada ay kiciso korantadooda. Waxay u baahan yihiin awood hoose iyo tamar waxayna wali soo saaraan iftiin ka ifaya nalka hore ee halogen taas oo sidoo kale horseedda LED-yada cimri dhererkooda. Diooorkooda waxaa lagu maareyn karaa qaabab kala duwan oo bixiya qaabeyn u gaar ah. Tikniyoolajiyadda LED-ka, aragtida ayaa si aad ah loo hagaajiyay oo diirada la saaray. Inkasta oo qiimaha bilowga ah ee HID iyo guluubka halogen-ka uu ka yaryahay LED-yada, haddana hawlgallada iyo dayactirka kharashka LED-ka aad ayey uga hooseeyaan. Laydhka, lahaanshaha nolol dheeri ah, waxay yareeyaan dayactirka iyo qiimaha beddelaadda laambadda. Sababtoo ah LED-yada waxay u baahan yihiin in si isdaba-joog ah loo beddelo, milkiiluhu wuxuu ku bixiyaa wax ka yar nalalka cusub iyo shaqada loo baahan yahay in lagu beddelo Laydhka sidoo kale waxay isticmaalaan tamar yar; markaa qiimaha guud ee nidaamka LED wuxuu si weyn uga hooseyn karaa kan nidaamyada nalalka caadiga ah.
Xakameynta Gacan ku Qaadista, Qalabka Gawaarida, Isku Xidhitaanka Cunsurka, Qaybaha dayactirka, Qeybinta Qeybinta, Khatimidii Silicone Rubber,